Akanjo amoron-dranomasina, lamba fanatanjahan-tena, lamba anaovana any ivelany - Kuanyang
Ny fanimbana ny planetantsika vokatry ny fampiasana tafahoatra ny plastika dia zara raha voafafa
Ny plastika dia vokatry ny fotoanantsika ankehitriny, indrindra any amin'ny ranomasina. Ny kitapo plastika sy tavoahangy PET dia nanafika ny tontolo iainana sy miparitaka erak'izao tontolo izao. Araka ny antontan'isa dia sombina plastika 9 tapitrisa taonina no ampidirina amin'ny ranomasina isan-taona. Ho valin'ity olana ity, ny fanodinana azy ireo ho solon'ny polyester tera-tany (izay mandany solika betsaka) no vahaolana tontolo iainana tsara indrindra.
Wuxi Kuanyang Textile Technology Co., Ltd. dia manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana lamba fanatanjahan-tena ivelany sy anaty trano. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fanahiana iraisam-pirenena momba ny fandotoana plastika, ny orinasanay dia mifindra amin'ny lamba maharitra sy voaverina. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia nahazo mari-pahaizana GRS ary lasa mpamatsy lamba azo havaozina.
Ny fampisehoana lamba
PRODUKY CATEGORY Bullet FABRIC ITEM TSY MISY KWB-2125 Karazan-tsakafo famolavolana fitaovana 95% Po ...
PRODUCT CATEGORY Sportswear FABRIC ITEM NO KW6402 Supply Type Make-to-Order Material 86% ...
PRODUCT CATEGORY Sportswear FABRIC ITEM NO KW18-9040 Supply Type Make-to-Order Material ...
KATEGORIAM-PRODUKY Yoga mitafy ITB FABRIC TSY MISY KW18-1077 Karazan-tsakafo famolavolana karazana 8 ...
PRODUCT CATEGORY Swimsuit FABRIC ITEM NO KW-2182 Supply Type Make-to-Order Material 92% N ...
PRODUKY CATEGORY Sportswear FABRIC ITEM NO KW-2182 Supply Type Make-to-Order Material 88 ...
PRODUKY CATEGORY Jackets FABRIC ITEM NO KWS21-1021 Supply Type Make-to-Order Material 10 ...
KATEGORIAM-PRODUKY Yoga mitafy ITB FABRIC TSY MISY KWC21-4081 Karazan-tsakafo famolavolana karazana ...
KATEGORIAM-PRODUKY Yoga mitafy ITB FABRIC TSY MISY KWC21-4079 Karazan-tsakafo famolavolana ...
Vonona ny hianatra bebe kokoa
Tsy misy tsara noho ny mahita ny valiny farany. Mianara momba ny fahazoana epilog
brochure misy santionany amin'ny sokitra tamin'ny laser. Ary nangataka fanazavana fanampiny fotsiny
Miverina amin'ny fironana miloko fanatanjahan-tena ...
Fomba fiasa ho an'ny fanatanjahan-tena anaty ...
Akanjo fanatanjahantena lahy sy vavy ...
Fanampiny lamaody-ny fironana amin'ny antsipiriany amin'ny yoga ...
Fiarovana ny tontolo iainana sy maharitra ...